ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စင်ကာပူရောက် မြန်မာများတွေ့ရန် လူငါးထောင်ဆံ့ အခန်းငှား
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည့် The Singapore Summit သို့ တက်ရောက်မည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စင်ကာပူရောက် မြန်မာများ တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ရန် လူဦးရေ အနည်းဆုံး ၅၀၀၀ ဆံ့သည့် Resort World Sentosa (RWS) ခန်းမကို ငှားရမ်းထားကြောင်း တွေ့ဆုံပွဲ စီစဉ်သည့် မြန်မာကလပ် (စင်ကာပူ) က စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
အများဆန္ဒအတိုင်း လူငါးထောင် ဆံ့နိုင်မည့် ခန်းမကို စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် ငှားရမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး စင်ကာပူ ရဲဌာနသို့လည်း ပွဲကျင်းပခွင့် တောင်းခံထားကြောင်း၊ တွေ့ဆုံပွဲ မတိုင်မီ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း မြန်မာကလပ်က ကြေညာသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုံခြုံရေးအတွက်မူ လူစုလူဝေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် မြန်မာကလပ်က တာဝန်ယူရမည်ဟု စင်ကာပူရဲဌာနက စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က အကြောင်းကြားထားကြောင်း မြန်မာကလပ်က ဆိုသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအတွက် ဝင်ခွင့်လက်မှတ်များ စတင်ရောင်းချမည့်ရက်ကို ဆက်လက် ထုတ်ပြန်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စင်ကာပူအစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ The Singapore Summit သို့ တက်ရောက်မည် ဖြစ်ပြီး ယင်းမတိုင်မီ ဥရောပနိုင်ငံအချို့သို့ သွားရောက်မည် ဖြစ်သည်။
ဒီတစ်ပတ် The Voice ရဲ့ ပညာရေးကဏ္ဍမှာ လူငယ်တွေရဲ့ စာဖတ်စွမ်းရည်နဲ့ ပညာရေး ဘယ်လိုဆက်စပ်နေတယ် ဆိုတာ တင်ပြသွားပါမယ်။ အဲဒီလိုတင်ပြရာမှာ လူငယ်တွေရဲ့ စာဖတ်စွမ်းအား မြှင့်တင်ဖို့အတွက် အခရာဖြစ်တဲ့ မိဘတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ကိုလည်း ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီခေတ်မှာ လူငယ်တော်တော်များများက စာသိပ်မဖတ်ကြဘူး။ ဂိမ်းဆော့တယ်၊ ဖေ့ဘုတ်စ်သုံးတယ်၊ အင်တာနက်မှာ အချိန်ဖြုန်းတယ်ဆိုပြီး စာရေးသူနဲ့ သိတဲ့သူအချို့က သူတို့သား သမီးတွေကို စာကောင်း စာမွန်တွေ ဖတ်စေချင်ကြတယ်။ အဲဒီလိုစာဖတ်တယ် ဆိုတာ စာဖတ်ချင်စိတ် ရှိမှရတာ။ အဲဒီလို စာဖတ်ချင်စိတ်ရှိအောင်လည်း ကိုယ့်ဝန်းကျင်မှာ စာဖတ်နိုင်တဲ့ ဝန်းကျင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စာအုပ်စာကောင်းမရှိတဲ့ အိမ်မှာ ကိုယ့်ကလေးတွေကို စာဖတ်ပါလို့ချည်း ပြောနေလို့ မရဘူး။ သူတို့လက်လှမ်းမမီတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ စာအုပ်စာကောင်းတွေ ရှိဖို့လိုပါတယ်။
စာရေးသူတို့ တိုင်းပြည်မှာ ဝန်းကျင်တည်ဆောက်မှု အရမ်းအားနည်းတယ်။ ဆိုလိုတာ လုပ်ချင်တာ၊ ဖြစ်ချင်တာတွေပဲ ပြောနေတာ။ အဲဒီလို လုပ်ချင်၊ ဖြစ်ချင်တာတွေ လုပ်ဖို့၊ ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ ဝန်းကျင်ကျတော့ မရှိဘူး။ ဖန်တီးမထားကြဘူး။ ဒီတော့ စာရေးသူတို့နိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာအတော်များများဟာ အဖြေမရှိတဲ့ ပုစ္ဆာလိုပဲ။ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိသိနဲ့ ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ အမှိုက်တွေ မပစ်ကြပါနဲ့ဆိုလည်း ပစ်တာပဲ။ ကွမ်းတံ တွေးတွေ မထွေးကြပါနဲ့ ဆိုလည်း ထွေးတာပဲ။ ကားအရမ်းမမောင်းကြပါနဲ့ ဆိုလည်း မောင်းတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ လုပ်တဲ့သူကလုပ်၊ ရှုပ်တဲ့သူက ရှုပ်နဲ့ မုန့်လုံးစက္ကူကပ်၊ ဘာပြဿနာ ရယ်မှ ပီပီပြင်ပြင်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ် သွားတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ အဲဒီအမှိုက်ကို မပစ်အောင်၊ ကွမ်းကိုမထွေးအောင်၊ ကားကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ မမောင်းအောင် ထိန်းကွပ်၊ ထိန်းညှိပေးနိုင်မယ့် ဝန်းကျင်အား နည်းနေလို့ပါ။
ဒီတော့ မိဘတွေအနေနဲ့ အခုလို အလွယ်တကူ လုပ်ကျင့်ရှိတဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့ အစည်းမှာ ကိုယ့်ကလေးတွေ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ရှိဖို့၊ စာကောင်းပေကောင်းဖတ်ဖို့ ဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်၌က ကိုယ့်အိမ်မှာ ကလေးတွေ အတွက် စာကောင်းစာပေဖတ်ဖို့ ဝန်းကျင် တစ်ခု ဖန်တီးပေးဖို့ လိုပါတယ်။ စာရေးသူ အိမ်အတော်များများ ရောက်ဖူးတယ်။ လူငယ်လူရွယ်တွေ အလွယ်တကူဖတ်နိုင်မယ့်၊ သူတို့ အတွေးအခေါ်တွေကို အားပေးမယ့် စာကောင်းစာပေဆိုတာ သိပ်မတွေ့ရ တတ်ဘူး။
နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်တွေလောက်ပဲ တွေ့ရတတ်တယ်။ တချို့ ကလည်း စာအုပ်တွေရှိပါတယ် ဆိုပြီး ထုတ်ပြကြတယ်။ သိပ်မြင့်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ ဖဆပလခေတ်က စာအုပ်တွေ၊ နိုင်ငံရေး ကျမ်းတွေ၊ သမိုင်းစာအုပ်တွေ၊ တက်ကျမ်းတွေ အဲဒါတွေကျတော့ သိပ်မြင့်သွားပြီ။ ပြီးတော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကို ဇောင်းပေးရေးထားတာ ဆိုတော့ လူငယ်တွေ သိပ်စိတ်မဝင်စားကြဘူး။ ဒီတော့ သူတို့ဆီမှာ အဲဒီစာအုပ်တွေ ဖုန်တက်နေတာ အဆန်းတော့မဟုတ်ဘူး။
ဆိုလိုတာက ကိုယ့်သားသမီးတွေ စာဖတ်စေချင်ရင် ကိုယ့်အိမ်မှာ စာအုပ်အစုံ အလင် တတ်နိုင်သလောက် ထားရပါမယ်။ စာရွေးပြီး စုရပါမယ်။ ဗဟုသုတဖြစ်စေမယ့် စာအုပ်တွေ ရှိရမယ်။ အိမ်ကျဉ်းသည့်တိုင် စာအုပ်စင် အသေးလေးတစ်ခုတော့ ရှိသင့်တယ်။ အဲဒါဟာ အဲဒီအိမ်ရဲ့ စာကြည့်တိုက်ပဲ။ မိဘတွေဟာ အဲဒီစာကြည့်တိုက်ရဲ့ စာကြည့်တိုက်မှူးပဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကလည်း ဖတ်ပြရမယ်။ ဒါမှ သားသမီးက နောက်ကလိုက်လာမှာပေါ့။
စာရေးသူ နယ်မှာ တာဝန်ကျလို့ မိတ်ဆွေအိမ်တစ်အိမ် သွားလည်ဖြစ်တယ်။ သွားတိုင်း အိမ်ထောင်ဦးစီးက နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး တွက်နေတတ်တယ်။ ကွမ်းတဗျစ်ဗျစ် ထွေးတယ်။ သူ့အိမ်ရောက်တိုင်း စာရေးသူကို သူ့ကလေးတွေကို ဆုံးမပါ၊ ပညာတတ်ကြီးတွေ ဖြစ်စေချင်တယ်၊ စာဖတ်စေချင်တယ်၊ သူအမြဲပြောတယ်။ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ စေတနာကို လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကိုယ်တိုင်က ပြင်ဖို့လိုတယ်။ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး ထိုးတဲ့၊ တွက်တဲ့အိမ်က ကလေးတွေက နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး စိတ်ဝင်စား လာကြမှာပဲ။ ကွမ်းတဗျစ်ဗျစ် ထွေးတာ မြင်ရင် ဒီကလေးတွေလည်း ကွမ်းစားလာ ကြမှာပဲ။ ကိုယ့်ကလေးတွေ တကယ်ကောင်း စေချင်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ပြင်ဖို့လို တယ်။ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာတင် ကိုယ့်ကလေး တွေ မှန်မှန်ကန်ကန် ရှုမြင်တွေးခေါ်တတ် စေမယ့် ဝန်းကျင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့လို တယ်။ ဖန်တီးဖို့လိုတယ်။
စာရေးသူတို့နိုင်ငံရဲ့ လူတွေရှင်သန် ရတဲ့ဝန်းကျင်ဟာ အမြဲတမ်းပူလောင်နေ တယ်။ ပဋိပက္ခ အလွယ်တကူဖြစ်စေတယ်။ လူတွေ ပင်ပင်ပန်းပန်း ရုန်းကန်ကြရတယ်။ အိမ်အပြင်ထွက်တာနဲ့ အော်သံ၊ ဟစ်သံ၊ အလှူခံသံ၊ ကားသမားတွေ ဆဲဆိုသံ၊ ဘတ်စ်ကားပေါ် ပြေးတက်ကြတဲ့ မြင်ကွင်း တွေကအစ ဘာမှစိတ်ချမ်းသာစရာ မရှိဘူး။ စာရေးသူ အဆိုးအမြင်နဲ့ ရေးနေ၊ တင်ပြနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ်ရောက်ခဲ့ ဖူးတဲ့ ကိုယ့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက လူတွေ ရှင်သန်ရတဲ့ ဝန်းကျင်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောနေတာ။ ဟိုးခပ်ဝေးဝေးက ဂျပန်တို့၊ ကိုရီးယားတို့နဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ အဲဒီလို ပူလောင်၊ ဆူလောင် ဝန်းကျင်တွေထဲ မှာ သွားလာကျင်လည်နေရတဲ့ ကိုယ့်သား သမီးတွေကို အပြင်စရိုက်တွေ များများ မဝင် မလွှမ်းစေဘဲ ကိုယ့်အိမ်မှာ စာကောင်း ပေကောင်းတွေနဲ့ ယဉ်ပါးစေချင်တယ်။
စာရေးသူအိမ်မှာ အဖေက အလေ့ အကျင့်လုပ်ပေးထားတော့ ငယ်စဉ်ကတည်း က အိမ်တွင်းစာဖတ်ခြင်းဆိုတာနဲ့ ယဉ်ပါး ခဲ့ရတယ်။ အိမ်မှာ ၁၉၅၄ ခုနှစ်နဲ့ အဲဒီခုနှစ် များဝန်းကျင်က ထုတ်တဲ့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း စာအုပ် ၁၄ အုပ်ရှိတယ်။ အရင်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုလက်ထက်က ထုတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေ ပါ။ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ စာမျက်နှာ ၄ဝဝ ကျော်၊ ၅ဝဝ နီးပါး ရှိတယ်။ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ သမိုင်း၊ သိပ္ပံ၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အစုံပါတယ်။ စာရေးသူငယ်ငယ် ကတည်းက အဲဒီ စွယ်စုံကျမ်းစာအုပ် ၁၄ အုပ်နဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာ။ အဖေက အဲဒီ စာအုပ်တွေကို အလွယ်တကူ မြင်နိုင်၊ တွေ့ နိုင်တဲ့နေရာမှာ ထားပေးတယ်။ မဖတ်ဘူးလို့ သူထင်ရင် ဖတ်အောင် လမ်းကြောင်းပေး တယ်။ လေ့ကျင့်ပေးတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ စာရေးသူ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အကြောင်းတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းတွေ၊ မြန်မာ့သမိုင်း၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်း စသဖြင့် ယဉ်ပါးလာခဲ့တယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက စွယ်စုံကျမ်း မှာပါတဲ့ တိုက်တာမြင့်မြင့်မားမားနဲ့ မြို့ကြီးတွေ တွေ့ရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက အဲဒီလို အရမ်းဖြစ်စေချင်ခဲ့တယ်။ ဘယ်တော့ ဖြစ်လာမလဲလို့လည်း အမြဲတွေးခဲ့တယ်။ နိုင်ငံခြားရောက်ဖူးချင် တဲ့စိတ်တွေလည်း အရမ်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ စွယ်စုံကျမ်းမှာပါတဲ့ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ် ကြီးတွေကြည့်ပြီး တစ်ချိန် ငါ နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်ရမယ်လို့ ကျိတ်တွေးခဲ့ဖူးတယ်။ အရွယ်ရောက်လာတော့ အဲဒီငယ် ငယ်ကတည်းက တွေးခဲ့၊ ဖတ်ခဲ့တာတွေက ကိုယ့်ဘဝမှာ တွန်းအားတွေဖြစ်လာတယ်။ အဖေက သူမဆုံးခင်မှာတောင် နေမကောင်းတဲ့ ကြားက အဲဒီစွယ်စုံကျမ်းစာအုပ်ကြီး ၁၄ အုပ်ကို အဖုံးအသစ်တွေ ပြန်ဖုံးပေး သွားခဲ့တယ်။ အဖေ့ဆီကရတဲ့ အကောင်းဆုံး အမွေတစ်ခုပါပဲ။
စာရေးသူ UN မှာ အလုပ်လုပ်စဉ် နယ်အတော်များများကို ရောက်ဖြစ်တယ်။ Project တွေမှာရှိတဲ့ စာကြည့်ခန်း၊ စာကြည့်တိုက် ဆိုတာတွေ ဝင်လေ့လာဖြစ်တယ်။ စာရေးသူတို့ လာချိန်မို့လားတော့ မသိဘူး၊ ကလေးတွေ၊ လူငယ်တွေ စည်စည် ကားကားနဲ့ တွေ့ရတတ်တယ်။ စာကြည့်တိုက် ထဲမှာလည်း စာအုပ်စာတမ်း အတော်စုံပါရဲ့။ ဂျာနယ်၊ ကာတွန်းတွေလည်း ရှိတယ်။ စာရေးသူ မသိမသာ အချိန်ပေးပြီး လေ့လာကြည့်တယ်။ ကလေးအတော်များများက ကာတွန်းတွေလောက်ပဲ ဖတ်ကြတယ်။ ကလေးဆိုပေမယ့် ဆယ်ကျော်သက်တွေကို ပြောတာပါ။ တချို့လူငယ်တွေ ဆိုရင် သူတို့ ဦးစားပေးတာ လက္ခဏာ၊ ဗေဒင်ကဏ္ဍ ဖတ်ပြီးရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တောင် မျှလိုက်သေးတယ်။ ဆောင်းပါး၊ နိုင်ငံရေးသတင်း ဖတ်တာမျိုး တော်တော် ရှားတယ်။ မဖတ်ချင်တဲ့သူကို ဖတ်ပါ ပြောလို့တော့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ စာကြည့်တိုက်မှူး တွေ၊ စာကြည့်ခန်း တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း လမ်းကြောင်း (Guide) ပေးဖို့ လိုမယ် ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာဆို စာကြည့်တိုက်မှူးတွေ ဆိုတာ ပညာရှင်တွေပဲ။ လစာလည်း ကောင်းကြတယ်။ စာဖတ်သူအနေအထားကို လေ့လာပြီး စာကြည့်တိုက်တွေထဲမှာ စာအုပ်တွေကို ခဏခဏ အပြောင်းအလဲလုပ်တယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ စာဖတ်စွမ်းအား မြှင့်တင်ရေးနဲ့ အမျိုးသား ပညာရေးမှာ အရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်တယ်။ စာကြည့်တိုက်မှာရှိတဲ့ စာအုပ်အမျိုး အစားကို မသိမသာ အပြောင်းအလဲလုပ်ပေးဖို့ လိုတယ်။ ဗဟုသုတဖြစ်စေမယ့် စာတွေ၊ အသက်အရွယ်အလိုက် ဦးနှောက်ကို စိန်ခေါ်စေမယ့်စာတွေ၊ ကလေးတွေ၊ လူငယ်တွေ အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီအောင် စာကြည့်တိုက် တွင်းမှာတင် ဈေးကွက် (Marketing) ဖော်ရမယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အပျော်ဖတ် စာပေတွေကို အာရုံစိုက်မှု လျော့သွားစေရ မယ်။ ဆိုလိုတာ စာဖတ်သူတွေရဲ့ စာဖတ်ချင်စိတ်၊ စာဖတ်စိတ်ကို အတွေးမှန်၊ အသိမှန် ရစေမယ့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုအပေါ် ဆွဲတင်သွားနိုင်ဖို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလုပ်ဖို့က စာကြည့်တိုက်မှူးတွေ၊ စာကြည့်တိုက် တာဝန်ရှိသူ တွေရဲ့ စေတနာပါမှု၊ အချိန်ပေးနိုင်မှု၊ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်မှု၊ အမြင်ကျယ်မှုတွေ ပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်ပါတယ်။ အကယ်၍ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ကာတွန်းထိုင်ဖတ်၊ ဗေဒင်လက္ခဏာ၊ ဂမ္ဘီရလောက်ပဲ စိတ်ဝင်စား နေရင်တော့ အဲဒီစာကြည့်တိုက် တွေက အရေအတွက်ကနေ အရည်အချင်းကို ပြောင်းလဲလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတော့ ကိုယ့်သားသမီးတွေ စာများများ ဖတ်စေချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အိမ်၊ ကိုယ့်စာအုပ်စင်က စကြဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီ အိမ်တွင်းစာကြည့်တိုက် တွေကို စာအုပ် တစ်အုပ်နဲ့ စလည်း ရတယ်။ စာအုပ် ၁၀ အုပ်နဲ့ စလည်းရတယ်။ ရန်ကုန်မှာ မိဘ အတော်များများက ကိုယ့်သားသမီးတွေကို British Council လို၊ American Centerလို နေရာတွေဆီ အထင်တကြီး ပို့တတ်ကြ တယ်။ စာကောင်းစာမွန်တွေ အဲဒီမှာ အများကြီးတွေ့ပြီး ကိုယ့်သားသမီးတွေ အသိဉာဏ် ကြီးပွားတိုးတက်လာမယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ မမှားပါဘူး။ ဒီစာကြည့်တိုက် တွေမှာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်တွေ အရမ်း စုံတယ်။ သင်တန်းတွေရှိတယ်။ သင်ထောက်ကူပစ္စည်း ကအစ အပြည့်အစုံ ထားပေးတယ်။ လုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မိမိကိုယ်၌က တကယ့်ကို ကြိုးစားချင်စိတ်၊ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်၊ စာဖတ်ချင်စိတ် မရှိဘဲ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေ၊ ရင်းမြစ်ဌာန (Resources Center) တွေသွားသွား ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ အဲဒီက ပို့ချတဲ့စာတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ တိုးတက်မှုကို မလိုက်နိုင်လို့ စိတ်ကျရောဂါလို ဖြစ်သွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေတောင် တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီမှာ ပုံတွေလောက်ကြည့်၊ ကြော်ငြာလောက် သာဖတ်၊ သင်တန်းအပျော်တက်၊ ဟိုဟိုဒီဒီ မျက်စိကစားပြီး အချိန်ဖြုန်း၊ အချိတ်အဆက် လုပ်ချင်သူတွေလည်း အများကြီးပါ။
ဒါကြောင့် ဒီစာဖတ်ကျင့်ကို ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ အစပြု ပျိုးထောင်ပေးစေချင်ပါ တယ်။ အထူးသဖြင့် နယ်မှာဆို လူငယ်တွေ စာဖတ်အား သိပ်နည်းပါတယ်။ အခုလို လက်ကိုင်ဖုန်းတွေ လူတိုင်းနီးပါး (အတော်များများ) ကိုင်နိုင်ပြီဆိုတော့ အဲဒီဖုန်းတွေ တစ်ချိန်လုံး ကလိနေကြသူတွေ အများကြီးပါ။ အင်တာနက်က တွေ့သမျှ သတင်းတွေဖတ်၊ မိန်းကလေးပုံတွေ ဖလှယ်၊ အတင်းအဖျင်း သတင်းတွေ မျှကြနဲ့၊ နယ်လိုနေရာမျိုးမှာ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ရန်ကုန်လို မဟုတ်ဘဲ သွားစရာ၊ လုပ်စရာကလည်း နည်းလေတော့ ဒီလူငယ်တွေရဲ့ ရှေ့ရေး စဉ်းစားကြည့်ရင် အတော်ရင်လေးဖို့ ကောင်းပါတယ်။ နယ်ဆိုပေမယ့် နယ်မှာနေတဲ့ လူတွေက အများစုမဟုတ်လား။ စာကောင်းစာပေ စာဖတ်ကျင့်မရှိတဲ့ အဲဒီမျိုးဆက်က ပွားလာတဲ့ နောက်မျိုးဆက်ကလည်း သူ့ရှေ့က မျိုးဆက်လိုပဲ ပေါ့ပေါ့နေ၊ ပေါ့ပေ့ါစားနေကြမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ ဘယ်သောအခါမှ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြမယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေသတွင်း အာဆီယံလို နေရာမျိုးမှာတောင် ဟိုးနောက်နားက အတော်လှမ်းလှမ်း ပြတ်ကျန်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ အခုလည်း ကျန်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းကနေ တစ်စုတစ်ဖွဲ့၊ တစ်စုတစ်ဖွဲ့ ကနေ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အထိ စာဖတ်စွမ်းရည် မြှင့်ဖို့လိုနေပါတယ်။ ဒါဟာ အမျိုးသားရေး တာဝန်တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ မိဘများအနေနဲ့ အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်းရဲ့ ဧည့်ခန်းကိုယ်စီမှာ ကိုယ်နိုင်သလောက် စာအုပ်စင်လေးတွေ ထားကြရင် အဲဒီအမျိုးသားရေးတာဝန် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကိုယ့်သားသမီး တစ်ဦးချင်းက တစ်ဆင့် စာဖတ်စွမ်းရည် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးကြရင်း ကူညီပါဝင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ကြပါစေလို့ ဒီဆောင်းပါးက တစ်ဆင့် တိုက်တွန်းပါရစေ။
" ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး ဖြစ်စေသည့်အသားဖြူကရင်မ် ကုမ္ပဏီ ပြန်လည် သိမ်းဆည်း "
Kanebo ဂျပန် အလှကုန် ကုမ္ပဏီသည် အသားအရေကို အစွန်း အကွက် ဖြစ်စေသည့် အသားဖြူကရင်မ်အား တစ်ပတ်ခန့် ဆက်လက် တင်ပို့မိကြောင်း နှင့် ၄င်းကုန် ပစ္စည်း များအား ပြန်လည် သိမ်းဆည်း ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ မှ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်တွင် ပြောကြား သည်။
အဆိုပါ အသားအရေကို ထိခိုက် နိုင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းအား ကုမ္ပဏီမှ ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် ပြန်လည် သိမ်းဆည်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက် အား မိခင် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Kao ကထောက်ခံ ခဲ့ကြောင်း Kanebo ကုမ္ပဏီမှ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားသည်။
သို့ရာတွင် လက်ကား ဆိုင်များမှ ကုန်ပစ္စည်း ၄ ဒသမ ၇၅ သန်းကျော် ပြန်လည် သိမ်းဆည်း ခဲ့သော်လည်း ဇူ လိုင် ၄ ရက်အထိ အတိအလင်း ကြေညာခဲ့ခြင်း မ ရှိသောကြောင့် ၄င်း ကုန်ပစ္စည်း အား တစ်ပတ် နီးပါးတင်ပို့ ရောင်းချခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှု ကြောင့် အသုံးပြုသူ များစွာ ထိခိုက်ခဲ့ရ ကြောင်း ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
”Blanchir Superior” စသည့် ကုန်ပစ္စည်း ကို သြဂုတ် ၂၅ ရက်အထိ ဂျပန် နိုင်ငံ၌ သုံးစွဲမိသူ စုစုပေါင်း ၈၆၇၈ ဦး ရှိကြောင်းနှင့် ၆၅ ဦးမှာ နိုင်ငံရပ်ခြား မှ ဖြစ်ကြောင်း Kanebo ကုမ္ပဏီ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
Kanebo ကုမ္ပဏီမှ ကုန်ပစ္စည်း ပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သည့် နိုင်ငံများမှာ ဂျပန်၊ ဗြိတိန်၊ ထိုင်း၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား ၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရွှေစက်တော်တွင် နိုင်ငံခြားသားများကို ညအိပ်ခွင့်ပြုရန် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ တောင်းဆို
ဗုဒ္ဓ၏ အထက်စက်တော်ရာနှင့် အောက်စက်တော်ရာ (ခြေတော်ရာ) တို့ရှိသော မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းဘူး မြို့နယ်ရှိ ရွှေစက်တော် ဘုရားတွင် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများကို ညအိပ်ခွင့် ပြုသင့်ကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များက မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ကို တိုက်တွန်းပြောကြားသည်။
စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် နန်းထိုက်သူဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်သော မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ၎င်းတို့က အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရွှေစက်တော်ဘုရားတွင် တဲအိမ်ငယ်နှင့် သန့်စင်ခန်းများကို သပ်ရပ်သန့်ရှင်းစွာ ဆောက်လုပ်ငှားရမ်းပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာနှင့် ၁၅ ဒေါ်လာအတွင်း ရရှိနိုင်ကြောင်း ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ပုဂံဇုန် အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်ဝေက ပြောကြားသည်။
“နိုင်ငံခြားကို ဆန်တစ်တန် တင်ပို့ရင် ၃၂၄ ဒေါ်လာပဲရတယ်။ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားတစ်ယောက်လာရင် At Least (အနည်းဆုံး) ဒေါ်လာနှစ်ထောင်ရတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ရွှေစက်တော်တွင် နိုင်ငံခြားသားများ တည်းခိုရန်အတွက် ဇိမ်ခံဟိုတယ်ကြီးများ တည်ဆောက်ခြင်းထက် ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော တဲအိမ်ငယ်များ ဆောက်လုပ်ထားခြင်းက နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများကို ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက အကြံပြုသည်။
ဂေဟအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် ရွှေစက်တော်ရှိ ဘေးမဲ့တောများ၊ မြန်မာ့ဒေသ ရင်း ရွှေသမင်များ၊ ရှားပါးတိရစ္ဆာန် မျိုးစိတ်များကို လိုက်လံပြသနိုင်ကြောင်း မကွေး တိုင်းဒေသကြီး သစ်တောဦးစီးဌာန တိုင်းဦးစီးမှူး ဦးမြင့်သိန်းက ရှင်းပြသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများကို မကွေးမြို့ရှိ ဟိုတယ်များတွင်သာ ညအိပ်ခွင့်ပြုထားသည်။ ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များ၏ တင်ပြချက်ကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဘုန်းမော်ရွှေက နားထောင်ခဲ့သော်လည်း တစ်စုံတစ်ရာ မှတ်ချက်ပေး ပြောဆိုခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်း၊ မင်းလှခံတပ်၊ ရွှေစက်တော် ဘုရားစသော ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်ရာ နေရာများရှိပြီး မကွေးမြို့မှတစ်ဆင့် ပုဂံ-ညောင်ဦး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ် ကဲ့သို့သော တိုင်းရင်းသား ယဉ်ကျေးမှု ဒေသများသို့ သွားရောက်နိုင်သဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အချက်အချာကျသောဒေသ ဖြစ်ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များက ဟောကိန်းထုတ်ထားသည်။
"နိုင်ငံ အတွက် အရေးပါတဲ့ အနုပညာ အကြောင်း ပြောသူ အဆိုတော် လင်းလင်း"
အနုပညာသည် အနုပညာရှင် အတွက်ရော နိုင်ငံ အတွက်ပါ အရေး ပါကြောင်း အဆိုတော် လင်းလင်းကပြောသည်။
”ကျွန်တော် ကတော့ ကျွန်တော့် စိတ်ကို အတတ် နိုင်ဆုံး အရိုးရှင်းဆုံး ထားတယ်။ ကိုယ့်အနုပညာ အလုပ်က သတ်သတ်၊ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ လူတိုင်း လူတိုင်းက ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုထားသင့်တဲ့ နိုင်ငံ ချစ်စိတ်ကလည်း သတ်သတ် ထားပြီးတော့ ဒီအရာနှစ်ခုစလုံးမှာ ဘယ်အရာကိုပဲ လုပ်လုပ် အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ်ကို အရိုးရှင်း ဆုံးထား လုပ်တယ်။ ပြည်သူ အတွက်၊ ပရိသတ် အတွက် မော်ဒယ် တစ်ခုလိုမျိုး တင်ပြနေတယ်။ အနု ပညာရှင် ပိုင်း ရဲ့လူတွေက ကိုယ့် ရဲ့ပရိသတ် ပြည်သူ လူထု အတွက် ကိုယ် လုပ် လိုက်တဲ့ အရာကို အားကျပြီး အမြင် မမှားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ မမှားဖို့ ကို ရှေ့ကနေပြီးတော့ သေသေချာချာ နဲ့ စမတ်ကျကျ လျှောက် လှမ်းနိုင်ဖို့ က အရေးကြီး တယ်။ ကလေး လူကြီး အထိုက် အလျောက် ရှိတာပဲ။ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံမှာ အနုပညာ ဆိုတာ မရှိ မဖြစ် ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်” ဟု ၄င်းကဆိုသည်။
”သီချင်း တစ်ပုဒ်ကို အဓိက ရေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာ ဆိုရင် ကိုယ် တတ်နိုင်တဲ့ အားနဲ့ ခံစားမှု၊ တတ်ကျွမ်းမှု၊ နည်းပညာ အားလုံး ပေါင်း ပြီးတော့ တတ်နိုင်သလောက် အားစိုက် ရေးထားတာပါ။ ကိုယ် ဖန်တီး လိုက်တဲ့ အနုပညာ တစ်ခုကို ပရိသတ်က ကြိုက်တယ်၊ လက်ခံတယ် လို့ တုံ့ပြန်တာ ခံရရင် ကျေနပ် ပီတိ ဝမ်းသာလည်း ဖြစ်ရပါ တယ်” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
အနုပညာကို ဖျော်ဖြေရေးလို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့ သူ ရှိသလို ဝါဒဖြန့် အနုပညာရပ် တစ်ခုလို့လည်း မြင်ကြခြင်း အတွက်
”အမျိုးမျိုးတော့ ထင်ကြေး ပေးကြမှာပဲ။ ကိုယ် ဥာဏ်မီရင် မီသလာက်ဖွဲ့ ဆိုလို့ ရပါတယ်။ အနုပညာ ဆိုတာ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်ဖို့ တစ်ခု အတွက်လောက် ပဲ ယူဆတဲ့ ဥာဏ် အဆင့်နိမ့်တဲ့ သူက အဲဒီလောက်ပဲ စဉ်းစား မိကြမှာပေါ့။ ဒီ အနုပညာ ဆိုတာက နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘယ်လို ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်လဲ စဉ်းစားနိုင်တဲ့ သူက ရင်ထဲမှာ အဓိပ္ပာယ် ရှိကြမှာပါ”ဟု လင်းလင်း က ပြောသည်။
ဗြိတိန်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများအတွင်း ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက် ကြည့်ရှုမှုများရှိ
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ ဥပဒေပြု လွှတ်တော်၌ အစည်းအဝေးများ ကျင်းပနေစဉ်အတွင်း အင်တာနက်ဖွင့်ပြီး ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ကြိုးစားမှု အများအပြား ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ထွက်ပေါ်လာသည့်နောက် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်အတွင်း လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပနေစဉ်တွင် ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းမှု အကြိမ် (၃၀၀၀၀)မျှ ရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိလာသည်။ ယင်းအရေအတွက်သည် လွှတ်တော်အတွင်း တပ်ဆင်ထားသည့် ကွန်ပျူတာများမှ ကြည့်ရှုသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် လိပ်စာများကို ခြေရာခံ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုမှုသည် တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်(၈၀၀)မျှ ရှိတတ်ကြောင်း ဝက်စ်မင်နစ်စတာ နန်းတော် ITနည်းပညာ အကြီးအကဲများက ပြောကြားခဲ့သည်။
ပါလီမန်တွင် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုထားသည့် ကွန်ရက်နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ဖော်ထုတ် စုစည်းခဲ့သည့် စာရင်းတွင် အမတ်များ၊ လွှတ်တော်သတင်းယူသူများ အားလုံး၏ ကွန်ပျူတာ မှတ်တမ်းများ ပါဝင်နေသည်။ တာဝန်ရှိသူများက Auto Refreshဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့ အခြေအနေများကြောင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ ရှာဖွေ အသုံးပြုမှုသည် လက်ရှိစာရင်းပါ အရေအတွက်လောက် များပြားမည် မဟုတ်ဟု ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ပါလီမန် အတွင်းရှိ ကွန်ပျူတာများသည် ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ချိတ်ဆက် ကြည့်ရှုခဲ့သည် ဆိုခြင်းမှာမူ ငြင်းဆန်၍ မရချေ။
"အရမ်းတိကျတဲ့ အချက်အလက်တွေလို့တော့ ကျွန်တော်တို့ မပြောလိုပါဘူး။ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကနေ ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုကို ကြည့်ရှုလိုက်ပေမယ့် တခြားဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုကို Pop-up Windowsနဲ့ အလိုလို ဖွင့်လိုက်တာမျိုး၊ ကြားခံ Softwareတွေကနေ ကိုယ်ဖွင့်လိုက်တာ မဟုတ်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေဆီ ရောက်သွားတာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ် မဟုတ်လား"ဟု လွှတ်တော် ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ရန်ကုန် ၊ စက်တင်ဘာ ၅။ ။ အောင် ဘာလေ သိန်းဆုဌာနခွဲတွင် ကျပ် သိန်း ၁၅၀၀ ဆုကြီးတစ်ဆုကို ယနေ့တိုင် လာရောက်ထုတ်ယူ ခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ ဘဏ္ဍာသိမ်းနှစ် ကျော်လွန်သွားပြီး လာရောက်ထုတ်ယူမှုမရှိ သော တန်ဖိုး နည်းဆု မဲများအပါ အဝင် တန်ဖိုးကြီးဆုမဲများမှာ နှစ် စဉ် ကျန်ရှိနေသော်လည်း ယခု ကျန်ရှိနေသော အောင်ဘာလေ ထီလောကတွင် ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀ အနေဖြင့် ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထီလောကအသိုင်း အဝိုင်းမှ သိရ သည်။
ပထမဆုံး ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ရှာဖွေရမယ်။ အိုင်ဒီယာဆိုလည်း အိုင်ဒီယာပေါ့။ အဲဒါက လူသိများကောင်း လူသိများလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် ပြီးပြည့်စုံလောက်အောင် မကောင်းသေးတဲ့ အရာတစ်ခု။
ဖွံ့ဖြိုးအောင်လည်းလုပ်ပြီးပြီဆိုရင် Sample တစ်ခု အရင်ထုတ်ရပါမယ်။ ကနဦး စံနမူနာပစ္စည်း တစ်ခု ဖန်တီး ယူရပါမယ်။
ငွေထည့်မယ့် လုပ်ငန်းရှင်လိုအပ်ပါတယ်။ ယင်းလုပ်ငန်းရှင်ကို ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ Product ကို ချပြရပါမယ်။ Detail မလိုပါဘူး။ Investor အတွက် Profit and Process လောက်ပဲ focus လုပ်ပြီး Explain တာ ကောင်းပါတယ်။ Data Detail သွားရှင်းမိရင် Investor က Holder ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Sexy ဆန်ဆန် ဒီဇိုင်းများ ၀တ်ဆင်လေ့ရှိသော အေးမြတ်သူက ယခုနောက်ပိုင်းတွင် အသက်အရွယ်အရ တည်ငြိမ်သည့်ဘက်သို့ ရောက်ရှိလာသောကြောင့် မြန်မာဝတ်စုံများကို ဦးစားပေးဝတ်ဖြစ်ကြောင်း ပြော
“အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူ့အသက်အချိုးအဆစ်တစ်ခုမှာ အပြောင်းအလဲဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို အပြောင်းအလဲလိုမျိုး ကျွန်တော့် အကြိုက်တွေလည်း ပြောင်းလဲသွားတာပါ”ဟု အေးမြတ်သူက ပြောသည်။
အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် ကျရောက်မည့် ရဲတပ်ဖွဲ့နေ့ဂုဏ်ပြုဇာတ်လမ်းတွင် ရဲအုပ်တစ်ဦးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ဖြိုးငွေစိုးနှင့် တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အေးမြတ်သူက ပြောသည်။
“ခေါက်ထီးလေး မလုံ့တလုံ” ရုပ်ရှင်ကားတွင်လည်း ဘ၀ကို လေးလေးနက်နက်မတွေးဘဲနေထိုင်သည့် မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ပုံစံ သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ရိုက်ရက်အနည်းငယ် ကျန်နေသေးကြောင်း အေးမြတ်သူက ပြောသည်။ “လုပ်ကွက်လည်းရတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အိုက်တင်ကိုလည်း ပြခွင့်ရတယ်။ ကံကောင်းလို့ ရိုက်ခွင့်ရတာပါ” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယခုရိုက်ကူးပြီးသည်အထိ ဒါရိုက်တာခိုင်းသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားကြောင်း အေးမြတ်သူက ပြောသည်။
၂၀၁၂ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှ စတင်၍ နိုင်ငံခြားခရီးများ ဆက်တိုက်သွားဖြစ်နေပြီး ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လက သွားရောက်ခဲ့သော ကိုရီးယားခရီးစဉ်မှာမူ ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း၏ ကမ်းလှမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းကပြောသည်။
From : .... Planet Myanmar Network
လူသတ်မှုမကျူးလွန်ရန်၊ ဆက်ကြေးမကောက်ခံရန် ဘာကြောင့် SSA လက်မခံ တာလဲ
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ လက်ရှိသမ္မတ တက်လာတဲ့အချိန်က စပြီးတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ကို အလေးအနက် ထားပြီးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခဲ့သည်မှာ ပြည်သူလူထုအသိပင် ဖြစ်ပါ တယ်။ ထို့အတူ လက်ရှိအခြေအနေ အထိလဲ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ အတွက် အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ် တာနှင့်အညီ ၊ နှစ်ကာလကြာရှည်စွာတည်တံ့ခဲ့တဲ့ လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ၁၁ ဖွဲ့နှင့်လည်း ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူပြီးဖြစ်တယ်လို့ ပြန်ကြားရေး သတင်းတွေ အရသိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လို့ ဦးအောင်မင်းအပါအ၀င် မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာမှ တာဝန်ရှိသူတွေ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ ကနေ စက်တင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့အတော အတွင်းမှာ တောင်းပိုင်းရှမ်းတပ်မတော် နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူဖို့ အတွက် အလွတ်သဘော နဲ့ (၂) ကြိမ်တွေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဘာဖတ်ရ လဲလို့ ဆိုတော့ SSA ဗိုလ်မှူး စိုင်းလိတ် က MPC ရဲ့ မူ ( ၆ )ချက် အပေါ်မှာ သဘောမကျဘူုး ဆိုတဲ့ အပြော အဆို မျိုးတွေ့ ရတယ်။
"ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေကို ပိုပြီးထိန်းချုပ်ချင်လာတဲ့ သဘောမှာရှိပါတယ်။မူအသစ်တွေ ထပ်ထွက်လာ ပါတယ်"ဟု ရှမ်းပြည်နယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီနှင့် တောင်ပိုင်း ရှမ်းတပ်မတော် တို့၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ဗိုလ်မှူးစိုင်းလိတ်က စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ကမြန်မာတိုင်း(မ်)ကို ပြော သည်။
စက်တင်ဘာလ ၂ရက်နေ့တွင်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့တွင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌဦးသူရရွှေမန်း အပါအ၀င်အခြားအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုဆွေးနွေးမှုတွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်သန်းထွဋ်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအနေဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ နေထိုင်ရန် လိုပြီးထိုကဲ့သို့မပြူမူပါက တပ်မတော်က တိုက်ခိုက် ရှင်းလင်းမှုများပြုလုပ်မည် ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း
လည်း ဗိုလ်မှူး စိုင်းလိတ်ကပြောသည်။
ကဲ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ SSA ဗိုလ်မှူး စိုင်းလိတ် က သဘောမကျတဲ့ MPC ရဲ့ မူ ( ၆ )ချက် ကိုကြည့်ရအောင်--
၆။ အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများတွင်ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်ရန်နှင့် တပ်မတော် လက်အောက်ခံပြည်သူစစ် များကိုမတိုက်ခိုက်ရန်…
ဆိုတဲ့..အချက်(၆) ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုရှုထောင့်ကပဲကြည့်ကြည့် ဒီအချက် ၆ ချက် ဟာပြည်သူ လုထု အသက် အိုးအိမ်စည်းစ်ိမ် နဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်စားသောက်နိုင်ရေး နဲ့လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန် စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်ရေး စတဲ့အချက်တွေ အပေါ်အခြေခံပြီး ချမှတ်ထားတယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုကြည့်ကြည့်မြင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီအခြေခံမူ (၆)ချက်ကို လိုက်နာဖို့ခဲယဉ်းနေတယ် ၊ လိုက်နာဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတော့ တောင်ပိုင်း SSA ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဆိုတာ မေးစရာ ရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့ SSA ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ ဒေသခံတွေအတွက်အပေါင်းလက္ခဏာလား၊အနှုတ် လက္ခဏာလားဆိုတာ မေးခွန်း ထုတ်စရာ မလိုပဲ အဖြေက ပါပီးသားဖြစ်နေ ပါတယ်။ ဒါက ပြည်သူလူထု အကျိုးအတွက် တကယ်လိုလား သလား မလိုလားဘူးလား ဆိုတဲ့အပိုင်းပါ။ ။
နောက်အခြားတစ်ဖက် က တောင်ပိုင်းSSA ရဲ့နေရာကနေ ဘာကြောင့်ဒီ အချက်တွေကို မလိုက်နာ နိုင်တာလဲ ဆိုတာ လဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ချက်ပါပဲ။ အခုတလော မြန်မာ နိုင်ငံမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို (တန်ဖိုးငွေကျပ်သိန်းရာ/ထောင်/ သောင်းချီ) မိတာတွေဟာ ၃ရက် တစ်ခါလောက် ဖတ်နေရတဲ့သတင်းဖြစ်လာတာ သတိထားမိမှာပါ။ ဒါ့ထက် သြဂုတ်လ (၆)ရက်နေ့ က သစ်ကား အစီး ၅၀ ကျော် ဖမ်းဆီးမိတဲ့သတင်းကိုလဲကြားမိမှာပါ။ ဒီတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ သစ်ခိုး ထုတ်တာတွေ ဖမ်းမိတာတွေ ၊အရှိန်အဟုန်နဲ့ တားဆီးဖို့ ဆောင်ရွက်နေတာတွေက တောင်ပိုင်း SSA ရဲ့ရှေ့ဆက်ရပ်တည်မှုကိုအပြည့်အ၀ကြီးမဟုတ်တောင်ရာခိုင်းနှုန်းတစ်ခုတော့ခြိမ်းခြောက်နေမှာပါပဲ။
ဒီတော့အခြားထွက်ပေါက်တစ်ခု အနေနဲ့ ဒေသခံတွေဆီက ဆက်ကြေးတိုးကောက်မယ် ၊ငြင်းဆန်မှုတွေ ရှိလာရင် လူသတ်တာတွေ၊ အတင်းအဓမ္မ မ၀င်မနေရ လူသစ်စုတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ဒါတွေဟာ လုပ်နေကြ SSA အတွက် မဆန်းကြယ်ပေမယ့်၊ မူ ၆ ချက်ကို သဘောတူပြီး တဲ့နောက်ဆိုရင်တော့ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့မရတဲ့ အခြေအနေထဲကို ၀င်ရောက် သွားမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒါကိုငြင်းဆန်ရမှာပဲ မဟုတ်ပါလား။ ဒီတော့ တောင်ပိုင်း SSA ရဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေအပေါ် သဘောထားနဲ့ သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ဘာလဲ ၊ ဘယ်လဲလို့မေးစရာရှိလာပြီမဟုတ်ပါလား။
ကိုးကား- Myanmar Times
ယောကျာ်းလေးများတွင်ပါ ဆီးလမ်းကြောင်းကင်ဆာရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင် တဲ့အမျိုးသ္မီးသုံးကိုယ်ဝန်တိုင်းကရိယာ
SEX COFFEE နှင့် LADY COFFEE အကြောင်း ဗဟုသုတ အနေနဲ့ သိထားစေချင်တယ်
Sex Coffee (XS-X0020-D) ဒါကိုတော့ ကြောညာသူတွေက Superior Brazilian coffee ဘရာဇီးကော်ဖီ အပြင်းစားလို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ Fast thawing tea powder အပြော့စားလက်ဖက်ရည်လို့လဲ စာထဲမှာ ရေးထားပါတယ်။
အထဲမှာပါတာတွေကတော့ (၁) သကြားအဖြူမှုံ နဲ့ (၂) အမျိုးသမီးများစိတ်ကို တွန်းအားပြောင်းစေနိုင်တဲ့ ဓါတ်လည်း ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
• Sexual intercourse anxiously with the opposite sex ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ရှိသူနဲ့ အတူနေချင် စိတ်တွေ ပြင်းပြလာမယ်။
• Spends together with own sexual partner သူ့အဖေါ်နဲ့ အတူတူ အကြာကြီး ချစ်စခန်းဖွင့် နေလိမ့်မယ်။
၁။ ဒါဟာ အကြင်လင်မယားတွေသာ သုံးရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုသာမသုံးရင် ဥပဒေနဲ့ မညီတာတွေဖြစ် လာစေနိုင် တယ်။
၂။ အမျိုးသမီး (ကြီး) တွေမှာ ဗဂျိုင်းနား ခြောက်နေတာနဲ့ လိင်စိတ် ရှိသင့်တာထက် နည်းနေတာဆိုရင် သုံးနိုင်တယ်။ ဥပမာ သွေးဆုံးချိန်၊ ကလေးမီဖွါးပြီး စိတ်အခြေနေပြောင်းချိန်မျိုးဖြစ်တယ်။
ဘယ်လောက်သောက်ရမလဲ။ တထုပ်ကို ရေနွေးပူပူ ၁ဝဝ စီစီ (မယ်လ်) မှာဖျော်ပါ။ တထုပ်ထက်ပို မသုံးပါနဲ့။ ကပ်ဘူးတခုမှာ 15000mg စီပါတဲ့5ထုပ် 8 ခုပါတယ်။ ထုပ်လုပ်ပြီးနောက် ၃ နှစ်အတွင်း သုံးနိုင်တယ်။
အရသာထူးကဲပြီး အကြာကြီးစွဲစေတယ်။ စိတ်ဖြေနားနေနိုင်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ အမေရိကား ကလာတဲ့ ကော်ဖီထဲမှာ တရုပ်ကလာတဲ့ ရိုးရာဆေးရောထားပါသတဲ့။ ဗီတာမင်တွေ၊ ဓါတ်ဆားတွေ၊ အာဟာရဓါတ်တွေပါတယ်လို့ ကြော်ညာပါတယ်။ မ-ဟော်မုန်း (အီစထိုဂျင်) ပါတယ်လို့လဲဖတ်ရပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာ အရွယ်ရလာရင် နည်းလာတယ်။ သွေးဆုံးရင် သိသိသာတယ်။ အကောင်း လဲဖြစ်စေပြီး အဆိုးလည်း ဖြစ်စေနိုင်တာ သတိပြုပါ။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ခေါင်းမူးဝေမယ်၊ အိပ်ချင်မယ်။ ဖြေးဖြေးချင်းသောက်တာ ကောင်းတယ်။ ကားမောင် နေတုံး မသောက်ပါနဲ့။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရင် မသောက်ပါနဲ့။ အသက်ရှူလမ်းရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါရှိရင် မသောက်ပါနဲ့။
အခုရေးတာတွေဟာ ဆေးကြော်ညာထဲမှာ ပါတာတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ကျွန်တော်တို့လို) ဆရာဝန်တွေက အာမမခံပါခင်ဗျား။ ဒီလိုမျိုး ဆေးဆိုတာတွေရှိပါသေးတယ်။ ထပ်ရေးနေရင် ကြောညာထင်နေမှာမို့ မရေး တော့။ မိန်းကလေးများအားလုံး အညာ၊ အညစ် မခံကြရအောင် စားသောက်စရာမှန်သမျှ ပူတာ၊ အေးတာ ဘာမှစိတ်မချရတာကို သိကြပါ။
• Gold flysex medicine for woman စတာတွေက ဆေးမှုံ့၊ ဆေးတောင့်၊ ဆေးအဆီတွေဆိုပြီး လာတယ်။ အရောင်မပါ၊ အနံ့အထွက်ဘူး။ တချို့က အရေပြားကို သုတ်လိမ်းပေးတာနဲ့ ကိုယ်ထဲဝင် စေတယ်။ ဒီလိုဆေးအားလုံးဟာ မတော်မတရားပြုဘို့အတွက်သာ သုံးကြတယ်။ ဒါကြောင့် အေးအေးပူပူ သူများကတိုက်တဲ့ အစား၊ အသောက်တွေကို လက်မခံသင့်ဘူး။၊ လူချင်းထိပြီး ပွတ်သပ်ပေးတာကအစ ရှောင်ရှားနိုင်ဘို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ သင်္ကြန်ကာလတခုတည်းလည်း မဟုတ်ပါ။ အန္တရာယ်ဆိုတာ ကာလမရွေး၊ နေရာမရွေးပါခင်ဗျား။
ကလေးအဖေတစ်ဦး ကြိုးဆွဲချ၍ မိမိကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်မှုတစ်ခု သုံးခွမြို့နယ်တွင် စက်တင်ဘာ ၂ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အဆိုပါကြိုးဆွဲချသေဆုံးမှုမှာ သုံးခွမြို့နယ် မဟာမိတ်ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီ အချိန်တွင် မြို့နယ်ရဲစခန်း တာဝန်ရှိသူများက သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်ဟု ရဲဌာန၏ မှုခင်းမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
သေဆုံးသူအမျိုးသားမှာ အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ၎င်းသည်နေအိမ်အတွင်း ခြောက်ပေခန့်မြင့်သည့် ထုတ်တန်းတွင် ကလေးပုခက်ကြိုးဖြင့်ကြိုးဆွဲချ သေဆုံးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က မှတ်တမ်းတင် ထားသည်။
ထိုအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သေဆုံးသူ၏ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် မိသားစုဝင်များ၏ ပြောပြချက်အရ ၎င်းသည် အရက် အလွန်အကျွံ သောက်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာခံစားနေရကြောင်း ကနဦးစစ်ဆေးချက်များအရ သိရှိထားရသည်ဟုလည်း ရဲကဆိုထားသည်။
ရဲများက ၎င်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ် ကြိုးဆွဲချ၍သေဆုံးခြင်း ဟုတ်မဟုတ် ဆက်လက်စစ်ဆေးရန် အလောင်းကို သုံးခွဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း၊ ရဲစခန်းကလည်း သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် ၂၃/ ၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း တိုင်းရဲဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
အသုံးမဝင်ပါက လွှင့်ပစ်နိုင်ပါသည်….. သို့သော် အမှိုက်ပုံးထဲ ဘဝများပါမသွားစေရ
အကယ်၍ သင်သည် သင့်အပူနှင့်သင် သို့မဟုတ် သင့်ချိန်းဆိုမှုနှင့်သင် သို့မဟုတ် သင့်အဆင်မပြေမှုနှင့်သင် စိတ်စော၍ဖြစ်စေ၊ အပျော်နှင့်ဖြစ်စေ၊ စိတ်မရွှင်လန်း ညစ် ထေး မှုနှင့်ဖြစ်စေ အရေးတကြီးလျှောက်နေစဉ် တစ်စုံ တစ်ယောက်က သင်ရှေ့မှနေ၍ စာရွက်တစ်ခုခုကို ကမ်းပေးသည်ဆိုပါစို့။ ထိုအရာအတွက် သင့်ဆီကလည်း တစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မတောင်းသလို သင်ကလည်း ပေးစရာမလိုပါ။ သင်ဘာလုပ်မည်နည်း။ နှောင့်ယှက်သည်ဟုထင်ပါသလား။ ရှုပ်သည်ဟုထင်ပါသလား။ စိတ်ညစ်စရာ ဟုထင် ပါသလား။ အသုံးဝင်သည်ဟုရော ထင်ပါသလား။
တကယ်တော့ အထက်ကမေးခွန်းတွေကို စစ်တမ်းတစ်ခုလို ဒါမှမဟုတ် ဥာဏ်စမ်း တစ်ခုလို အဖြေများကို အေဘီစီဒီတပ်၍ နှစ်သက်ရာတစ်ခု ရွေးဖြေပါဟု တစ်ဦးချင်း မေးချင်မိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်တွင်နေထိုင်၍ ရန်ကုန်မြို့၏ လူစည်ကားရာ နေရာများတွင် ခြေတစ်လှမ်းစာပင် မလွတ်လပ်ချင်သော ကျပ်ကျပ်သပ် သပ်ပလက် ဖောင်းပေါ်တွင်လျှောက်ဖူးသူများကို မေးလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အစတွင်ရေးခဲ့သည့်အခြေအနေမျိုးကို လူတိုင်းကြုံဖူးကြ မည်ဖြစ်ေ သာကြောင့်ပင်။ မထူးဆန်းဟု ထင်မိသောအခါ မထူးဆန်းတော့ပါ။ အနည်း ငယ် အာရုံစိုက်မိမည်ဆိုပါက မထူးဆန်းသည့်တိုင် ယခင်က မမြင်ခဲ့ဖူးသည့် မရခဲ့ဖူး သည့်အေ တွး တစ်စတလေရနိုင်ခြေလည်းရှိပါသည်။ ရရမည်ဟု ယတိပြတ်မဆိုဝံ့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လောကတွင် ကြည့်သောမျက်စိတို့ မတူကြသလို မြင်သော အမြင်နှင့် ရသောအတွေးများလည်း ကွဲပြားနေကြသည်က သဘာဝပင်ဖြစ်သည်မဟုတ် လော။
ကျွန်တော် သူ့ကို ငေးနေမိသည်။ သူဝတ်စားထားသည်က သပ်ရပ်သည်။ ရော် ဘာဖိနပ်၊ ကချင်ပုဆိုးအနီနှင့် ရှပ်အကျီ အဖြူလက်တိုပေါ်တွင် လွယ်အိတ်ကို စလွယ် သိုင်းထားသည်။ ဦးခေါင်းတွင်တော့ အဖြူအနက် ကျားကွက်ဒီဇိုင်းနှင့် ဦးထုပ်။ သူ့အလုပ်က မထမ်းပိုးရပါ။ သက်စွန့်ဆံဖျားမဟုတ်ပါ။ ထို့အတူ ဈေးရောင်းသကဲ့သို့လည်း မဟုတ်ပါ။ ဟုတ်သည်။ သူ့အလုပ်က ဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေကို သူ့လက်ထဲမှ စာရွက် လေးကမ်းရုံသာဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်သူကမ်းသည်။ ပေးသည်။ သူ့ရှေ့မှ ဖြတ် သွား သူတိုင်းကို သူကမ်းသည်။ ကလေးလူကြီး ကျားမ မရွေးပါ။ လူမျိုးရေးမခွဲခြားပါ။ ထိုသူ ရ၍ ဤလူ မရ မရှိပါ။ သူ့ရှေ့ဖြတ်သွားလျှင်တော့ အကုန်ရကြရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယူပါ ယူပါဟု သူမအော်။ မယူမနေရဟုလည်း စည်းကမ်းချက်မရှိ၊ မယူသူများကိုလည်း သူအပြစ်မဆို။ ငြူစူခြင်းလည်း မရှိ။ သေချာသည်က သူ့မျက်နှာပေါ်တွင် ယူခြင်း မယူ ခြင်းအတွက် ခံစားချက်မရှိသည်က သေချာပါသည်။ ထို့ထက်ပို၍မူ သူ့မျက်နှာက ခံစားချက်မဲ့၍ ခပ်တည်တည်ပင်ဖြစ်နေပါသေးသည်။
”ဒီအလုပ်က ရယ်စရာလည်း မလိုဘူးလေ။ ဒီလိုပဲဝေပေးလိုက်တာပဲ။ ဘာမှတော့ မဟုတ်ဘူး။ သြော် သူတို့ လက်မအားလို့ မယူတာလို့ပဲ သဘောထားပါတယ်။ ဘယ် လိုမှ တော့မခံစားရပါဘူး” ဟု လှည်းတန်းမှ တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့လူများကြား ကြော်ငြာစာရွက်ဝေ နေသူ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ မောင်မင်းမင်းဦးက ပြောသည်။ ပြီးတော့ သူက ဆက်ပြောလိုက်သေးသည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ စည်ကားရာနေရာများတွင် ထိုသို့ကြော်ငြာစာရွက်ဝေသူများကို တွေ့ရတတ်စမြဲပင်။ အားလုံး၏ အပြုအမူက တစ်ပုံစံတည်းဟု ဆိုရလောက်အောင် လူစည် ရာနေရာတွင်ရပ်မည်။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာများကို စာရွက်ကမ်းပေးမည်။ ယူယူ မယူယူ ကမ်းထားသောလက်ကိုတော့ မရုပ်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ သူတို့လက်က ကိုယ့်ကိုဟန့်တားထားသလိုလို တမင်လုပ်သလိုလိုဖြစ်တတ်သည်။ ထိုအတွက်လည်း သူတို့ဆီက အားနာပြုံးသို့မဟုတ် ”ဆောရီး”ဆိုသည့်စကားကို ကြားရဖို့ မမျှော် လင့် ကောင်းပါ။အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဒါက သူတို့စတိုင်။ ထို အချက်ကို လက်မခံပါက သေချာပါသည်။ သင်သည် ရန်ကုန်ပါး မဝသေးသော သူသာ ဖြစ်ပေ မည်။ မောင် မင်းမင်းဦးက
လှိုင်သာယာတွင် နေသည်။ ပညာအရည်အချင်းက လေးတန်း။ စာသင်ခုံများနှင့် ကျောင်းခန်းအကြောင်းလည်း မမေးလိုတော့။ မြန်မာ့ လူမှုဘဝ၏ ထူးမခြားနားဇာတ် လမ်းများထဲတွင် သူ သည်လည်း ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင် ဖြစ်မည်။ နှစ် သက်စရာတစ်ခု ကတော့ သူက သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဆင်ယင် ကာ အလုပ်လုပ်တတ် သည်ကို ဖြစ် သည်။
”ကျွန်တော်က ဒါလုပ်တဲ့အခါ ဒီလိုပဲ ဝတ်တတ် တယ်” ဟု အင်္ကျီအဖြူကို အမှတ်တမဲ့ငုံ့ကြည့်ပြီး သူက ပြောလိုက်သည်။
ဤလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွင် လုပ်ကိုင်တတ်ကြသူအများစု က လူငယ်များသာ။ တချို့နေရာများတွင်တွေ့ရသည်က ကလေးများ။ ကျောင်းဝင်း ၏ ပြင်ပ တွင် ရောက်ေ နကြ သော်လည်း ပျက်စီးလေလွင့်မနေဘဲ ဤသို့ သမ္မာအာဇီဝ ကျကျ လုပ်နေကြသည်က မဆိုးဟုသတ်မှတ်ရမည်။ တကယ်တော့ သူတို့အလုပ် လုပ်နေကြခြင်းဖြစ် ပါသည်။ ပညာအရည်အချင်းမလိုသော၊ ငွေကြေးအရင်းအနှီး မလိုသော၊ ကျောထောက်နောက်ခံနှင့် အကပ်မလိုသော အလုပ်မျိုးက ရှားသည်။ ဒီလိုအလုပ်မျိုးကတော့ လုပ် လိုစိတ်နှင့် ရိုးသားမှုပဲ လိုသည်။
ရန်ကုန်တွင် ကြော်ငြာယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားလာပြီး နောက် တချို့က ငွေကုန်ကြေးကျခံကာ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုနှင့် နေရာ အနှံ့တွင် ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ် များ ထောင်ကြသည်။ မိမိကုန်ပစ္စည်းပေါက်အောင် ကြံဆ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ သို့သော် ထိုသို့လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသူများ ကတော့ ဒီလိုလက် ကမ်း ကြော်ငြာစာ ရွက်လေး များဖြင့် လူထုကြားပျံ့နှံ့အောင်လုပ်သည်။ သူတို့အတွက်လည်း အရင်းအနှီးကုန်ကျ စရိတ်နည်းသလို အခွန်အခလည်း ထပ်မကုန်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုမို့ တွင်တွင် ကျယ် ကျယ် သုံးကြခြင်းဟု ထင်ရသည်။
”ရွက်ရေ ၅ဝဝ ကုန်ရင် သုံးထောင်ရတယ်။ ကိုယ် နိုင်သလောက် ယူပေါ့။ အရွက်တစ်ထောင်လောက်ယူပြီး ကျန်ရင်လည်း ပြန်သွင်းလို့ရတယ်။ ကုန်သလောက်တော့ ပိုက်ဆံရမှာပေါ့” ဟု မောင်မင်းမင်းဦးက အလုပ်သဘောကို တစ်ခွန်းမေး တစ်ခွန်းဖြေသည်။ သူက သိပ်စကားမပြောချင်။ သူ့အလုပ်ကို နှောင့် ယှက်နေသည်ဟုပင် ထင်နေလားမသိ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်က နှောင့်ယှက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ နေ့စဉ်နီးပါး မြင်တွေ့ ကြုံရတတ်သည့် သူတို့ရပ် တည်မှုကို စိတ်ဝင်စားခြင်းသာဖြစ် သည်။ သူက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်စားပွဲထိုးလည်း လုပ်ခဲ့သည်။ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တွင်လည်း လုပ်ခဲ့သည်။ နောက်တော့ ဒီ အလုပ်ခွင်ထဲရောက်လာခြင်း။
”စရိတ်ငြိမ်းကတော့ အဆင်မပြေဘူး။ အိမ်ကို ပိုက်ဆံပြန်ပေးရတော့ ပုတ်ပြတ်ပဲလုပ်တယ်” ဟု မောင်မင်းမင်းဦးက တုံးတိတိ ပြော သည်။ ဒီအလုပ်တွင် အချိန်သတ် မှတ်ချက်က အလုပ်အပ်နှံသူပေါ် မူတည်သည်။ သူတို့လာခိုင်းချိန်တွင်သွား၍ ကိုယ်နိုင်သလောက် ကြော်ငြာစာရွက်ယူရုံပင်။ ပြီးလျှင် တော့ ကိုယ်ရွေးထားေ သာ နေရာသို့ သွား အလုပ်စ။ စာရွက်ကုန်လျှင် အလုပ်ချိန်ပြီးပြီ။ ပိုက်ဆံသွားထုတ်၍ ပြန်။ လွယ်လိုက်တာကွာဟု ဆိုလိုက ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အလုပ်ဟူသည်က ချွေးထွက် သည်ဖြစ်စေ၊ မထွက်သည်ဖြစ်စေ ဖိအား အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါသည်။ တစ်နေကုန် လူတွေကြားတွင် မတ်တတ်ရပ်၍ တောက်လျောက် ကမ်းနေရခြင်းတွင်လည်း ဖိအားက အမှန်ရှိသည်။ ရွက်ရေ ၅ဝဝ ကုန်မှသာ သုံးထောင် ရမည်ဖြစ်ရာ ဖြတ်သွားဖြတ်လာများထဲမှ လူ ၅ဝဝ လုံးသာ မယူဘဲ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါ လျှင် ———-။
သူနှင့် စကားပြောကြည့်ရင်း ကျွန်တော် သိလိုက်ရတာတစ်ခုရှိသည်။ အဖြေဟု လည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ တကယ်တော့ ကိုယ်လိုချင်သည်ဖြစ်ဖြစ်၊ မလိုချင်သည်ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကတော့ ကမ်းမည်သာ။ သူ့ဆီက ချက်ချင်းယူပြီး သူ့ရှေ့မှာတင် ပြန်လွှတ်ပစ်လိုက်ပါ စေဦး၊ သူကတော့ မည်သို့မှခံစားရမည်မဟုတ်။ သူ့အတွက် အရေးကြီးသည်က လက်ထဲ မှ စာရွက်များ တဖြည်းဖြည်းနည်းသွားဖို့။ မြန်မြန်ကုန်လျှင်သူတို့မြန်မြန်ပိုက်ဆံရ၍ ပြန်ရမည် မဟုတ်လား။ ထိုသို့ ပြန်သည်ကလည်းအခြားကလေး များလို ဆော့ ကစား ပျော် ပါးရန် မဟုတ်။ မောင်မင်းမင်းဦးက ဒီအလုပ်သိမ်းပြီး ညနေတွင် ကုန်ထမ်းရသေးသည်။
”ကုန်ထမ်းရင်တော့ စွပ်ကျယ်နဲ့ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ပေါ့” ဟု အလုပ်နှင့်ကိုက်ညီ အောင်ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်သော သူ့လုပ်ငန်းခွင်စတိုင်ကို ပြောပြသေးသည်။ လှည်းတန်း ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း လူကမပြတ်။မောင်မင်းမင်းဦး ခဏနားစဉ်မှာ တော့ သူ့တာဝန်ကို တစ်လှည့်ယူ ထမ်းပေးသူလည်း ရှိပါသည်။ တကယ်တော့ ဒီအလုပ် အတွက် လှိုင်သာယာမှနေ၍ မောင်နှမနှစ်ယောက် လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ အသက် ၁၅ နှစ်သာရှိသေးသော သူ့ညီမလေးသက်ထားခင်ကတော့ သူ့အစ်ကိုလိုမဟုတ်။ ကလေး သာသာမို့လည်း ဟန်မဆောင်တတ်သည်က ပေါ်လွင်သည်။ သူကလည်း ဒူးအထိရောက် နေသည့်လွယ်အိတ်ပွပွကြီးကို စလွယ်သိုင်းထားသည်။ ဆံပင်များကို ကြက်ေ တာင် နှစ်ဖက်ခွစီးထားပြီး ဖြတ်သွား ဖြတ်လာလူများကို သူက သေချာကြည့်သည်။ စတိုင်ကျ ကျလှလှပပ ဝတ်စားထားသော မိန်းကလေးများကိုတွေ့တော့ သူ့အငေး၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ကျွန်တော်နား လည်လိုက်သလိုပင်။ သူက သူ့အစ်ကိုလို မဟုတ်ပါ။ မယူဘဲထွက်သွားသော လူ များကို သူကြည့်ပုံက ဆူဆူပွပွ။ ”ဟွန်း အလ ကားလည်းပေးရသေးတယ်။ ဒါလေး ယူသွားတော့ဘာဖြစ်မှာလဲ”ဟု သူထုတ်မပြောသော်လည်း သူ၏ခပ်စူစူနှုတ်ခမ်းက ထို သို့ပြောနေသကဲ့သို့ပင်။ သူက သူ့အစ်ကို ထက်တော့ ပညာအရည်အချင်းက တစ်တန်း ပိုပါသည်။
သူက ၅ တန်းမှကျောင်းထွက်ခဲ့သူ။ မိုးမရွာ၍ သူတို့ အလုပ်မပျက်သော် လည်းကျဲကျဲ ပူသောနေရောင်အောက်တွင်လည်း သူ့အတိုင်းအတာနှင့် သူပင်ပန်းမည်ကို သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသည်က သူတို့အလုပ်တွင် တကယ်ဝေ မဝေ စောင့်ကြည့်သူ မရှိသလောက်ဖြစ်ရာ ဤသို့မဝေဘဲ မလုပ်ဘဲ အစဖျောက်၍ ပိုက်ဆံထုတ်လျှင်ရော ဆိုသည့်မေးခွန်းဖြစ်သည်။
”အဲလိုမလုပ်ပါဘူး။ ဝေစရာရှိဝေတာပဲ”ဟု မောင်မင်းမင်းဦးက ခပ်တည်တည်ပင် ပြောသည်။ ထိုအရာက ရိုးသားမှုဖြစ်သည်။ ယူခြင်းမယူခြင်းက သူ့အတွက် ပြဿနာ မဟုတ်။ သူ့တာဝန်က ယူထားသည့် ကြော်ငြာစာရွက်များကုန်အောင်ကမ်းမည်။ သူ့ရှေ့ တွင်ပင် လွှတ်ပစ်ပစ်၊ ဆုတ်ပဲဖြဲဖြဲ။ အလကားဝေခြင်းဖြစ်၍ သူမပိုင်။ လမ်းသွားလမ်းလာ များကို အခန့်မသင့်ပါက နှောင့်ယှက် နေသလိုဖြစ်နိုင်သော်လည်း နှောင့်ယှက်နေခြင်း မဟုတ်။ သူတို့အလုပ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
”အရင်ကတော့ နည်းနည်းပါးပါး စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ နောက်တော့ မကြည့်တော့ ဘူး။ တကူးတကတော့ လုပ်မယ့်သူကို လိုက်ချိတ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒီနားမှာဆို အဲလိုလုပ်
ချင်သူတွေ ပိုပေါပါတယ်” ဟု လှည်းတန်း ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းအတွင်းမှကွန်ပြူတာ နှင့် ဘာသာရပ်သင်တန်းတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ အလကားဝေ သည့် သူတို့ကြော်ငြာကတော့ အလကားမဖြစ်ကြောင်းကို ”လူနှစ် ဆယ်သုံးဆယ်လောက်တော့ ရတတ်ပါတယ်။ အလိုဝေပြီးတဲ့အခါတွေမှာ ဖတ်မိပြီး သိပြီး လာစုံစမ်း တတ်ကြတာ ရှိပါတယ်”ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။ တကယ်တော့ အလကားရသော အရာဆိုပါက လူများက တန်ဖိုးထားမှုနည်းသော် လည်း အချည်းနှီးတော့လည်း မဖြစ်ကြောင်းကို ထိုစကားကသက်သေခံနေခြင်းမဟုတ်လော။ အကယ်၍ သင်သည် သင့်အပူနှင့်သင် သို့မဟုတ် သင့်ချိန်းဆိုမှုနှင့်သင် သို့မဟုတ် သင့် အဆင် မပြေမှုနှင့် သင် စိတ်စော၍ဖြစ်စေ၊ အပျော်နှင့် ဖြစ်စေ၊ စိတ်မရွှင်လန်းညစ်ထေးမှုနှင့်ဖြစ် စေ အရေးတကြီးလျှောက်နေစဉ် တစ်စုံတစ်ယောက်က သင်ရှေ့မှနေ၍ စာရွက် တစ်ခုခု ကို ကမ်းပေးသည် ဆိုပါစို့။ ထိုအရာအတွက် သင့်ဆီကလည်း တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မ တောင်းသလိုသင်ကလည်းပေးစရာမလိုပါ။ သင်ဘာလုပ် မည် နည်း။ နှောင့် ယှက်သည် ဟုထင်ပါသလား။ ရှုပ်သည်ဟု ထင်ပါသလား။
စိတ်ညစ်စရာဟု ထင်ပါသလား။ အသုံး ဝင်သည်ဟုရော ထင်ပါသလား။ တကယ်တော့ အထက်ကမေးခွန်းတွေကို စစ်တမ်း တစ်ခုလို ဒါမှမဟုတ် ဥာဏ်စမ်းတစ်ခုလို အဖြေများကိုအေဘီစီဒီတပ်၍နှစ်သက်ရာ တစ်ခုရွေးဖြေပါဟု တစ်ဦးချင်း မေးချင်မိပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဘာမဟုတ်သည့် အပြုအမူတစ်ခုခု သည် လူတစ်ယောက်ကို ကူညီလိုက်နိုင်သည့်အကျိုးတရားဖြစ်စေသည် ဆိုပါက ထိုအပြုအမူကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်သင့်သည် မဟုတ်လော။ ကျွန်တော်က တော့ ထိုသို့ပင်ထင်မိပါသည်။ အက ယ်၍ သင်သည် ရန်ကုန်မြို့၏ လူစည်ကားရာနေရာ တစ်ခုခုတွင် သင်နှစ် သက်ချင်မှ နှစ်သက်မည်ဖြစ်သော်လည်း ထိုကဲ့သို့လက်ကမ်းကြော်ငြာတစ်ခုခုဝေသော လူငယ် တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် ကလေးတစ်ဦးဦးနှင့်ကြုံသည့်အခါ မငြင်းဆန်ဘဲယူလိုက် စေချင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအပြုအမူသည် စွမ်းသလောက် တတ်နိုင် သ လောက် ရိုးရိုးသားသားအလုပ်လုပ်နေသော ကလေးများကို ကူညီလိုက်ခြင်း ဖြစ်သကဲ့သို့ သူတို့၏အလုပ် လုပ်ချင်စိတ်ကိုလည်း အားပေးရာေ ရာက်ေ သာကြောင့် ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကို မဖြစ်မနေ လက်ခံရမည်ဟု ကျွန်တော်မဆိုပါ။
သို့သော်သင်ထိုအချက်ကို အနည်းငယ်တွေးလိုက်မိပြီဟုဆိုပါလျှင် အထက်တွင်မေး ခဲ့သည့်မေးခွန်းများကို ဖြေရန် အဖြေအသင့်ရှိနေပြီဟု ကျွန်တော်ယူဆပါသည်။ တကယ် တော့ နောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုလည်း ရှိပါသေးသည်။ လက်ထဲရောက်လာသော ကြော်ငြာစာရွက်လေးကို ကျွန်တော်ဘာရယ်မဟုတ် ဖတ်ကြည့်မိသည်။ ထိုစာရွက်၏ အပေါ်ဆုံးတွင် ရေးထားသော ဝါကျကိုမြင်သောအခါ ကျွန်တော် သဘောတကျပြုံးမိ ပါသည်။ ထိုစာကြောင်းလေးမှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာဒုံ၌ ခုံးကျော်တံတားထိုးမည့် အစီအစဉ် ဘုရင့်နောင်ဘက်သို့ရွှေ့ရန် တိုင်းအစိုးရ အကြံပြု
မင်္ဂလာဒုံ ခရေပင်လမ်းဆုံ၌ ခုံး ကျော်တံတား ထိုးမည့် အစီအစဉ်ကို ဘုရင့်နောင်ဘက်သို့ ရွှေ့ဆောင်ရွက်ရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ရထား ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအား အကြံပြု စာပေးပို့လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဘတ်ဂျက်ဖြင့် မင်္ဂလာဒုံ ခရေပင်လမ်း ဆုံ၌ ခုံးကျော်တံတားထိုးရန် ယခုနှစ် တွင် မြေသားစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ထား ပြီး ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် အသုံးစ ရိတ်တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲရန် စီစဉ် ထားသော်လည်း ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ ၏ အကြံပြုလွှာကြောင့် ထပ်မံစဉ်းစား မှု ပြုနေကြောင်း ယင်းဝန်ကြီးဌာန အ ကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက ဆိုသည်။
”ဘယ်နေရာက ပိုသင့်တော်မလဲ။ ဒါကိုဆန်းစစ်နေတယ်” ဟု ၄င်းကဆို သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့သည် ခရေပင်လမ်းဆုံထက် ဘုရင့် နောင်တွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ၍ ထိုနေရာက ပိုသင့်တော်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဌာန ကမူ ဖြစ်သင့်သည့်နေရာတွင်သာ ခုံး ကျော်တံတား ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး တည် ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း နှစ်ခုစလုံး အား ပြည်ေ ထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင် ပြလိုက်ပြီဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း၌ ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကစ၍ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်အထိ ခုံးကျော်တံတားပေါင်း ၂ဝ တည် ဆောက်ထားသည်။ အစိုးရသစ်လက် ထက်တွင်မူ လှည်း တန်းခုံးကျော်တံတား တစ်စင်းကိုသာ ယခုနှစ် မေ ၃ဝ ရက် တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ရွှေဂုံတိုင်ခုံးကျော် တံတားနှင့် ဘုရင့်နောင်ခုံးကျော် တံတား နှစ်စင်းမှာမူ တည်ဆောက်နေ ဆဲ ဖြစ် သည်။
ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန က ခုံးကျော်တံတားတစ်စင်း၊ ဆောက် လုပ်ရေးက ခုံးကျော်တံတား နှစ်စင်းကို ရန်ကုန်တွင် ထပ်မံတည်ဆောက်ရန် လျာထားပြီး ဖြစ်ေ သ်ာလည်း ထိုတံတား များကို EU က ထောက်ပံ့သွားရန် ရှိ ကြောင်း အစောပိုင်း ကာလများက သ တင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ သို့သော် လျာ ထားစီမံကိန်းများကို EU ၏အကူအညီ မရရှိပါကလည်း လာမည့်နှစ်တွင် ထို ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခု၏ ကိုယ်ပိုင်ဘတ်ဂျက် ဖြင့် တည်ဆောက်ရန် အစီအစဉ်ရေး ဆွဲပြီးဖြစ်သည်ဟု ထပ်မံသိရသည်။
အလွန်ပင် နှစ်သက်စရာ ကောင်းသော ကားဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော ၎င်းကား အတွင်း၌ တီဗီ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊
ရေချိုးခန်း၊ မီးဖိုခန်း ၊ အိပ်ယာ စသော လူ့အသုံး အဆောင် ပစ္စည်းတွေ
မိသားစု တစ်စုတည်း နေလို့ ရတာ မဟုတ်ဘဲ သုံးစု လေးစု လောက်အထိ နေလို့ ရပါတယ်။
၎င်းကားအား အသုံးပြုတဲ့ နေရာကတော့ ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးတဲ့ အခါမှာသာ အသုံးပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သာမန် အိမ်ထောင်စုတွေ ဝယ်စီးခွင့် မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ထိုကားဟာ အရမ်းရှည်လို့ပါ။
ယာဉ်စီးကမ်း၊ လမ်းစီကမ်း ဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီပါဘူး။
စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံတွင် အရက်နှင့် ဆက်နွှယ်သည့်ဝေဒနာရှင် အများဆုံး
ရန်ကုန်မြို့တော် ရွာသာကြီးရှိ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံသို့ လာရောက် ဆေးကုသသူများအနက် အရက်နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် စိတ်ဝေဒနာရှင်ဦးရေမှာ အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဆေးရုံ၏ ဆေးရုံအုပ်ကြီးဖြစ်သူ ဒေါက်တာဦးကျော်စိုးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
အရက်သောက်လွန်ပြီး စိတ်ဖောက်ပြန်မှုများကြောင့် လာရောက် ဆေးကုသသူမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အစမှ သြဂုတ်လအထိ ၂၄၉၁ ဦးရှိပြီး စိတ်ကြွ၊ စိတ်ကျရောဂါ ဝေဒနာရှင်ဦးရေမှာ ၂၁၉၉ ဦးနှင့် စိတ်ကစဥ့်ကလျား ဝေဒနာရှင် ၁၂၉၂ ဦး ရှိကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
အရက်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ များပြားလာခြင်း၊ တံဆိပ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့် ဈေးနှုန်း ချိုသာခြင်းများကြောင့် အရက်သောက်သုံးသူ များပြားလာသလို၊ လူမှုဝန်းကျင်တွင် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှု များပြားလာခြင်းကြောင့်လည်း အရက်သောက်သုံးမှု တိုးပွားလာကြောင်း အဆိုပါ ဆေးရုံအုပ်ကြီးက ပြောကြားသည်။
“အရက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကရတဲ့ အခွန်အခထက် နောက်ဆက်တွဲ ဆေးကုသ စရိတ်က သုံးဆလောက် ပိုကုန်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ယခုလက်ရှိ အဆိုပါ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံတွင် တက်ရောက် ကုသနေသူ ၁၂၀၀ ခန့်ရှိပြီး ဧပြီလတွင် ၈၃၁ ဦး၊ မေလတွင် ၈၆၉ ဦး၊ ဇွန်လတွင် ၈၉၆ ဦး၊ ဇူလိုင်လတွင် ၉၀၇ ဦးနှင့် သြဂုတ်လတွင် ၁၀၄၄ လူနာဦးရေမှာ လစဉ်တိုးပွားလျက် ရှိကြောင်း၊ ယင်းတို့အနက် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကစဥ့်ကလျား ရောဂါဝေဒနာရှင်များဖြစ်ပြီး ဆေးရုံသို့ လာရောက်ကုသသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ရောဂါ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးနိုင်ကြောင်း ဆေးရုံအုပ်ကြီးက ပြောကြားသည်။
ကုလားထိုင်ကိုခပ်နိမ့်နိမ့်မထိုင်မိပါစေနှင့်။ ကုလားထိုင်မြင့်လေလေ ဒူးခေါင်းမကွေးရလေဖြစ်သောကြောင့် ဒူးဆစ်ညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်းမှ သက်သာစေနိုင်သည်။ ကုလားထိုင် တွင်ထိုင်သည့်အခါ ပေါင်နှင့် ကြမ်းပြင် မျဉ်းပြိုင်အတိုင်း ရှိနေပါစေ။ စားပွဲနှင့်ထိုင်ခုံတွဲချိတ်လျက်သား တည်ဆောက် ထားသောပရိဘောဂများ မသုံးပါနှင့်။
ကိုယ်နေဟန်ထားဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်ထားလျှင် အရိုးဆစ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမလိုအပ်ဘဲပွတ်တိုက်နေခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး အဆစ်ရောင်ဝေဒနာ များမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ထားနိုင်သည်။
(၃)အလွန်အကျွံခိုင်းခြင်း၊ အလွန်အကျွံ နားခြင်း
အလုပ်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရပြီး အနားယူချိန်မရှိပါက အဆစ်အမြစ် များ နာကျင်ကိုက်ခဲလာတတ်သည်။အဆစ်များကို အဆက်မပြတ်သုံးခြင်း၊ အပြင်းအထန်သုံးခြင်း၊ တလွဲသုံး ခြင်းပြုလုပ်မိပါက အဆစ်များ ရောင် ရမ်းလာတတ်သလို အသုံးမပြုဘဲ ကြာရှည်ထားလျှင် အဆစ်များ တောင့် တင်းလာတတ်သည်။ အလုပ်ချိန် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြား နားချိန်ထားပါ။ထိုင်ချိန်ကြာမြင့်၍ အဆစ်တောင့် တင်းခြင်းမဖြစ်စေရန် အနည်းဆုံး တစ်နာရီလျှင် တစ်ကြိမ်ခန့်မတ်တတ် ထ၍လှုပ်ရှားမှု အနည်းငယ်ပြုလုပ် ပေးပါ။
ရေနွေးနှင့်ရေစိမ်ချိုးပါ။ အပူ ချိန်ကြောင့်ကြွက်သားနှင့် အဆစ်များ ရောင်ရမ်းမှုလျော့ကျပြီး ရေထဲပေါ လောပေါ်နေခြင်းကအဆစ်များအပေါ် ကိုယ်အလေးချိန်သက်ရောက်မှု လျော့ နည်းစေသည်။
(၁)အမျိုးသမီးများသည် အစားအ သောက် ပိုမိုခုံမင်ကြသည်
အမျိုးသမီး (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းခန့် သည် နာရီဝက်တစ်ခါ အစားအသောက် အကြောင်းတွေးတောမိကြသည်။ အမျိုးသားအများစု၏ စိတ်အာရုံတွင် အစားအသောက်အကြောင်း တွေးတော မိလေ့မရှိပေ။
(၂) အမျိုးသားများ၌ စိတ်ခံစားမှုနှင့်အစားအသောက်ဆက်စပ်မှုမရှိ
စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲမှု၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုတို့သည် အမျိုး သမီးများ၌ အလိုအလျောက် အစား ပိုစားဖြစ်စေပြီး အမျိုးသားများ၌မူ အစားအသောက်ထက် အရက်၊ ဆေးလိပ် နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများဘက်သို့ ပိုမို ယိမ်းယိုင်စေသည်။
(၃) အမျိုးသားများတွင် ဇီဝဖြစ်ပျက်နှုန်းပိုမိုမြန်ဆန်သည်
ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အရပ်ထပ်တူကျသော အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတွင် အမျိုးသား၏ ဇီဝဖြစ်ပျက်နှုန်း (metabolic rate) မှာ အမျိုးသမီးထက် ပျမ်းမျှ ငါးရာခိုင် နှုန်းမှ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုများ သည်။ ဇီဝဖြစ်ပျက်ဖြစ်စဉ်များတွင် အစာချေဖျက်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ချေဖျက်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အဆီချေဖျက်ခြင်း စသည့် ဖြစ်စဉ်များပါဝင်သည့်အတွက် အမျိုး သားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန် ပိုမိုလွယ်ကူ ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဆိုင်ကယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိရာမှ တစ်ဦးသေ၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ
နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ ပျဉ်းမနားမြို့ ရွှေချီ (၉)လမ်း တစ်လမ်း မောင်းလမ်း၌ မော်တော်ဆိုင်ကယ် လမ်း ပြောင်းပြန် မောင်းနှင်မှုကြောင့် လမ်းမှန်မောင်းနှင်သူနှင့် တိုက်မှု ဖြစ်ပွားပြီး လမ်းမှန်မောင်းနှင်သူ သေဆုံး သွားသော ဖြစ်ရပ် တစ်ခု စက်တင်ဘာ ၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ စက်တင်ဘာ ၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ၅၅ မိနစ်ခန့်က နေပြည်တော်ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲအုပ်သက်ထူးပျဉ်းမနား ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ စုမှူးရုံး တွင် တာဝန်မှူး ဆောင်ရွက် နေစဉ် ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းအရ သက်သေ များနှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ ပျဉ်းမနား မြို့ ရွှေချီရပ်ကွက် (၉)လမ်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအနီးတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး(လမ်းမှား)မှ ပဋ္ဌာန်းဓမ္မာရုံဘက်သို့ အောင်ဇင် မင်း (၁၈)နှစ် ပေါင်းလောင်းရပ်ကွက် ပျဉ်းမနားမြို့နေသူ မောင်းနှင်သည့် ၂၁ယ/.... kenbo ၁၂၅ အနက် ရောင် ဆိုင်ကယ်နှင့် ပဋ္ဌာန်းဓမ္မာရုံ ဘက် (လမ်းမှန်)မှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ဘက်သို့ ပြည့်ဖြိုး ငြိမ်း ( ၃၀)နှစ် သကြားစက်ဝင်း ပျဉ်းမနားမြို့နေသူ မောင်းနှင်လာသည့် ၂၉ယ/.... Honda 90 စူပါကပ်ကျောက်စိမ်းရောင် ဆိုင်ကယ်တို့ လမ်းမ အလယ်၌ မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိကြပြီး နှစ်ဦး စလုံးဒဏ်ရာ အသီးသီးရရှိ သွားပြီး နေပြည်တော် ခုတင် ၁၀၀၀ ဆေးရုံ သို့ ဆေးကုသမှုခံယူရန် ပို့ဆောင်စဉ် ပြည့်ဖြိုးငြိမ်းမှာ ရရှိသောဒဏ်ရာ များဖြင့် သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး အောင်ဇင် မင်းမှာ အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေး ကုသမှုခံယူနေရကြောင်း သိရ သည်။
သတင်း နှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း
အဆင်သင့် ဆောက်လုပ်နိုင်သည့် လုံးချင်းအိမ်များကို တင်ဆောင်လာသော ၁၀ ဘီး ကားကြီး အစီး (၃၀) သည် ယနေ့ စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
Ready made ခေါ် အဆင်သင့် လုံးချင်းအိမ်များ စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသည့်အပေါ် စစ်တွေမြို့ခံ များက သတိထားပြီး စောင့်ကြည့်နေသည်ဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင် ဦးခိုင်ပြည်စိုးက နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ကြားတာကတော့ခါ တရုတ်ပြည်က ယူလာတဲ့ Ready made အိမ်တွေလို့ ကြားရတယ်။ အခု စစ်တွေကို ရောက်နေပါပြီ။ ဘယ်နေရာမှာ ဆောက်မယ်လို့တော့ မသိသေးဘူး။ ဘယ်သူ့ အတွက်လဲ? ရခိုင်အတွက်လား၊ ဘင်္ဂလီတွေအတွက်လားဆိုတာ မသိသေးဘူး။ စစ်တွေမြို့က လူတွေက ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်” ဟု၎င်းက ပြောသည်။
အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများမှ ယခုအချိန်ထိ သယ်ယူလာသော လုံးချင်း အိမ်များမှာ မည်သည့် နိုင်ငံက ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင် ကျေညာခြင်း မရှိသေးသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းလိုက်သာ လုံးချင်း အိမ်များ ဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေတွင် သတင်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဦးဝင်းမြိုင်အား ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ ၎င်းပစ္စည်းများ ရောက်ရှိနေသည်ကို သူ့အနေနှင့် မသိသေးကြောင်း ပြောသည်။
၎င်း လုံးချင်း အိမ်များကို တစ်စစီဖြုတ်ပြီး ယူဆောင်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အများစု ပစ္စည်းများမှာ သံဘောင်များနှင့် သံထည် ပစ္စည်း အမျိုးအမျိုး ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ပစ္စည်းမျိုးကို ယခင်က မမြင်ဖူးခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောဆိုသည်။
အဆင်သင့် လုံးချင်းအိမ်များမှာ ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခသည်များ အတွက်ဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေမြို့ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ရဟန်းပျိုအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးဓမ္မတဇက နိရဉ္စရာသို့ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
“ ဘောဒူရ မှာ ဘင်္ဂလီတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါ ဘင်္ဂလီတွေက သူတို့ကို လုံးချင်းအိမ်တွေ ဆောက်ပေးပါ ဆိုပြီး တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် နိုင်ငံတကာက အခုလို ပို့ပေးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက် လို့ ဇေယျာသီရိ ဆရာတော်ကြီးက ရခိုင် ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ကို လှမ်းပြီး ဖုန်းဆက်တဲ့ခါ ဟုတ်တယ်။ ဘင်္ဂလီတွေကို ပေးဖို့ အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
ကားကြီးများဖြင့် သယ်ဆောင်လာသော အဆင်သင့် လုံးချင်းအိမ်များကို ဆောက်လုပ်နိုင်သည့် ပစ္စည်းများကို ဝေသာလီကွင်း ဘေးရှိ အဆောင်တွင် ဘင်္ဂလီ အလုပ်သမား ၃၀ ခန့်ကို အသုံးပြုကာ လုံခြုံရေးများဖြင့် တာဝန်ယူပြီး ယာယီ စုပုံထားသည်ဟု မျက်မြင်များက ပြောသည်။
အဆင်သင့် လုံးချင်းအိမ်များဆောက်လုပ်ရန် ပစ္စည်းများကို နောက်ထပ် ကားအစီး ၅၀ ခန့် ဖြင့် ဆက်လက် သယ်ဆောင်လာကြသည်ဟု ခိုင်လုံသောသတင်းရပ်ကွက်အရ သိရှိရသည်။
နောက်ဆုံး ရရှိသော သတင်းအရ ယခု ရောက်ရှိလာသော အဆင်သင့် လုံချင်း အိမ်များ အရေအတွက်မှာ (၁၅၀) လုံး ဖြစ်ပြီး တရုတ်က ပေးပို့ လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်ကာ စုစုပေါင်း တန်ဖိုး ဒေါ်လာ (၁) သန်းဖိုး ရှိကြောင်း သိရသည်။
(နိရဉ္စရာ- ၄ စက်တင်္ဘာ ၂၀၁၃) / မောင်ရမ္မာ/မောင်အေး/ ခိုင်ထူးမြတ်